Apple က iPhone ကိုအရောင်း flatline တိုးတက်မှုနှုန်းမျှော်မှန်းချက်များကောင်းစွာအတိုကျရောက်အဖြစ် - သတင်း Rule
Apple က iPhone ကိုအရောင်း flatline တိုးတက်မှုနှုန်းမျှော်မှန်းချက်များကောင်းစွာအတိုကျရောက်အဖြစ်
သူ့ရဲ့ထိပ်တန်းအရောင်းရဆုံးဖုန်းရဲ့အရောင်းသာအားဖွငျ့ကွီးပှား 0.4% အားလပ်ရက်ကျော်, နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 46% အလားတူကာလပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျော်, ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီစံချိန်တင်ဝင်ငွေရေးသား
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Apple က iPhone ကိုအရောင်း flatline တိုးတက်မှုနှုန်းမျှော်မှန်းချက်များကောင်းစွာအတိုကျရောက်အဖြစ်” New York မှာဆမ် Thielman ကရေးသားခဲ့သည်, The Guardian ကအင်္ဂါနေ့တွင် 26 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလများအတွက် 2016 21.49 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Apple ရဲ့ iPhone ကိုအရောင်း flatlining နေကြတယ်, နည်းပညာကုမ္ပဏီတွင်အင်္ဂါနေ့ကပြောပါတယ်, ၎င်း၏ထိပ်တန်းအရောင်းရဆုံးမိုဘိုင်း device များအတွက်ရောင်းချမှုတိုးတက်မှုနှုန်းမှာချွန်ထက်နှေးကွေးကြေညာခဲ့သည်အဖြစ်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးသုံးလအတွက်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်၏ 74.8m ကိုရောင်းချ 2015, လေ့လာသုံးသပ်သူများက '' မျှော်မှန်းချက်ကိုအောက်တွင်. အတွင်းအလားတူကာလများတွင် 2014 ကုမ္ပဏီအ 74.46m အိုင်ဖုန်းကိုရောင်းချ, အရောင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အပြားခဲ့ကြအဓိပ်ပာယျ.
Apple ရဲ့ဝင်ငွေလောက်သုံးပုံနှစ်ပုံများအတွက် iPhone ကိုအကောင့်အရောင်း, အချို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစိုးရိမ်ပူပန်. "Apple ကတစ်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်,"ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Berenberg ရဲ့ Adnaand Ahmad ကကြေညာ, ဂျာမန်ဘဏ် "ရောင်း" ရန်ကုမ္ပဏီရဲ့စတော့ရှယ်ယာလျှော့ချအခါ,.
Apple က $ 75.9bn ၏စံချိန်သုံးလတစ်ကြိမ်ဝင်ငွေ posted နှင့် $ 18.4bn ၏သုံးလပတ်အမြတ်အစွန်း record, ဒါပေမယ့်ဝင်ငွေဒီလေးပုံတပုံလဲကျမယ်လို့သတိပေးခဲ့သည်.
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တင်မ်ကွတ်ခ်ကပြောပါတယ်: "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားအားကောင်းဖူးပါ။ " သူကဆိုသည် Apple က $ 293bn စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူ "လူအပေါင်းတို့သည်ဟန်ချက်စာရွက်များ၏မယ်တော်" ခဲ့, ငွေသား၏ $ 205bn နှင့်အတူ. အဓိကမှတ်တိုင် - သူကကုမ္ပဏီလက်ရှိတက်ကြွစွာ 1bn တက်ကြွ devices များရှိကြောင်းပြောသည်, ဟုသူကပြောသည်.
အဖြစ် Apple က၏နောက်ဆုံးသုံးလအတွက်ဝေးနည်းပါးလာအိုင်ပက်ကိုရောင်းဖော်ပြခဲ့သည်ကို iPhone ရောင်းအားနှေးကွေး 2015, 16.1မီတာ, တူညီတဲ့လေးပုံတစ်ပုံသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင် 21.4m တက်ဘလက်ကနေဆငျးသကျ. Mac ကရောင်းအား, လွန်း, ပယ်ခဲ့ကြ, သော်လည်းလျော့နည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်: ကုမ္ပဏီမှရောင်းချခဲ့ 4% နည်းပါးလာ, 5.3m တစ်ဦးစုစုပေါင်း.
၎င်း၏ "အခြားထုတ်ကုန်များ" အမျိုးအစားမှာဝင်ငွေ, သောက Apple စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တို့ပါဝင်သည်, $ 4.4bn ချရန်ကြီးပြင်း, ၏တတိယသုံးလပတ်မှာ $ 2.6bn မှတက် 2015 (ကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရောင်းအားဖော်ပြခဲ့သည်အခါ,). အမျိုးအစားထဲမှာအခြားပစ္စည်းများစည်းချက်သံဆက်စပ်ပစ္စည်းပါဝင်, Apple Pay ကိုနှင့် Apple TV ကို.
မိုဘိုင်းအရောင်းအတွင်းကျဆင်းမှုက Apple ဘက်တွင်သည်မဟုတ်. ကမ္ဘာတစ်ဝန်းစမတ်ဖုန်းတိုးတက်မှုနှုန်းကတည်းက၎င်း၏နိမ့်ဆုံးနှုန်းကျဆင်းခဲ့သည် 2013, သုတေသနကုမ္ပဏီအညီ Gartner မှ, ဒါပေမဲ့စားသုံးသူတွေအိုင်ဖုန်းသစ်တွေကြားမှာ၏ပင်ပန်းတယ်ဖြစ်အံ့သောငှါအရိပ်လက္ခဏာ Apple နှင့်ကျယ်ပြန့်ကိုအမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦးလေးနက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့.
Apple က၏တတိယသုံးလပတ်အတွင်းစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်သို့ဝင်ကတည်းက 2007, ကုမ္ပဏီအ 821m အိုင်ဖုန်းရောင်းချပြီ. အိုင်ဖုန်း၏အရောင်း Apple ကကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီအောင်နောက်ကွယ်မှအခြေခံအင်အားဖြစ်ရပြီ.
လွန်ခဲ့သည့်ရှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲနှစ်များတွင်, နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးမိုဘိုင်းဈေးကွက် upended, ထိုကြီးစိုး BlackBerry ကိုယူကျုံးနှင့်တစ်ဦး touchscreen interface များကဲ့သို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူရေတွက်ပြီးမှတစ်ခုလုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတင်းအကျပ်, haptic တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံဂီတစတိုးဆိုင်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီ Apple ကဝင်ဘယ်မှာသောဤအချက်မှာဒါကြီးမားသည်, စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုမကြာခဏအောက်ပါအတိုင်း - နှင့် Apple ၏ရှယ်ယာဆင်းသွားကြသည်. "Apple ကအကြောင်းပါဝင်သည် 7% စုစုပေါင်း S ကို၏&: P 500 ဝင်ငွေ,"S ကို၏အန်ဂျလို Zino ကပြောပါတယ်&: P Capital ကိုအိုင်ကျူ. "ဒါဟာ Apple အတွက်ဒါပေမဲ့ Apple ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အဘို့မသာကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသွားမယ့်. ထို 7% နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် ပဲ Apple အတွက်. သူတို့ကိုမှချည်ထားသောဖြစ်ကြောင်း Best Buy တူအခြားကုမ္ပဏီများတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ "
အိုင်ဖုန်းတွင်ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုခဲ့စဉ်တွင်, Apple ကသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်သစ်များနှင့်အတူလျော့နည်းကံကောင်းခဲ့. အိုင်ပက်၏အရောင်းရပ်တန့်ခဲ့ကြပြီး Apple ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က၎င်း၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဈေးကွက်အယူခံသက်သေပြဖို့မရှိသေးပါ.
စတိဗ်ဂျော့ဘ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းပထမဦးဆုံး iPhone ကိုတက်ရရှိထားသူ 2007. ဓါတ်ပုံ: ပေါလုက Sakuma / AP
အဘယ်သူမျှမက Apple ထုတ်ရေတွက်သည်, ဒါပေမယ့်သတင်းက iPhone သေချာစေရန်ကွတ်အပေါ်ကြီးမားဖိအားကိုထည့်လေ့မရှိ7နောက်ပိုင်းတွင်အတွက်အောင်မြင်တဲ့ပွဲဦးထွက်ရှိပါတယ် 2016. "ပင်လွဲချော်သို့မဟုတ်အနိမ့်လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူ, စတော့ရှယ်ယာပင်မြင့်မားရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်,"Zino ကပြောပါတယ်. "ကျနော်တို့မြင်ပါလိမ့်မယ်; ဒီ iPhone ကိုရောင်းအားအတွက်အထွတ်အထိပ်လျှင်လူကိုမေး, ငါမရှိဟုဆိုသည်။ "
အိုင်ဖုန်း၏အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့နိဒါန်း6Plus အားတစ်နှစ်လျှင်အစောပိုင်းကနှိုင်းယှဉ်အထူးသဖြင့်ဆိုးရွားကြည့်ရှုစေသည်; အချို့သောပြီးတော့နှင့် - - Zino စျေးကွက်နဲ့ Apple ရဲ့ဆက်စပ်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထှနျးမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်ကို iPhone ရဲ့ကြေညာချက်ကနေ 7.
စျေးကွက်ရင့်ကျက်အဖြစ်စမတ်ဖုန်းထိုးဖောက်မှု US မှာနှေးကွေးသည် - နည်းပါးလာခြင်းနှင့်နည်းပါးလာအမေရိကန်တွေကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အနည်းပညာချမှတ်ကြသည်, ဒါတချို့တိုးတက်မှုနှုန်းပြိုင်ဘက် undercutting မှလာ၏, အစားပြောင်းလဲအောင်ထက်.
တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ, Apple ကများများပြားလာသည် iPhone ရောင်းအားစောင့်ရှောက်ဖို့နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအစန်းကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဘယ်မှာ, အနာဂတ်မှာပင်လျော့နည်းအချို့သောကြည့်. Cook က Apple ကအောင်မြင်ခဲ့ဟုဆိုသည် 77% တိုင်းပြည်အတွင်းက iPhone ရောင်းအားတိုး. "ဒီထူးချွန်ရလဒ်များကိုသညျး, ကျွန်တော်တို့မကြာသေးခင်လအတွင်း သာ. ကြီးမြတ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အချို့သောစီးပွားရေးအနူးညံ့မှုကြည့်ရှုရန်စတင်, အများဆုံးအထူးသဟောင်ကောင်,"ကွတ်ကပြောပါတယ်.
23600	0 ပန်းသီး, အပိုဒ်, စီးပွားရေး, ဘဏ္ဍာရေး, iPhone ကို, အဓိကအပိုင်း, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, သုံးလတစ်ကြိမ်ရလဒ်များကို, ဆမ် Thielman, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, အုပ်ထိန်းသူ
← 10 သင်ကကလေးလုပ်ပါနိုင်ကိုသိပါမဟုတ်အမှုအရာ [Listverse] အဆိုပါ6အများစုမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အစားအစာများ →